Ilmuhu 'Godzilla' ayaa xoog u imanaya | Saadaasha Shabakadda
El Niño waa dhacdo saadaasha hawada wuxuu beddelaa qaababka dhaqdhaqaaqa socodka badda. Waxaa lagu celceliyaa 3dii ama 7dii sanaba mar, laakiin waxaa la rumeysan yahay in kuleylka adduunka darteed, in si isa soo taraysa looga ogaan doono adduunka oo dhan.
Dhowr sano ka hor, qiyaastii 1997, waxay ahayd mid aad u burbursan. Si kastaba ha noqotee, NASA waxay rumeysan tahay in sanadka 2016 xitaa ka weynaan karo kana awood badan, heer ay ugu yeereen "Godzilla."
1 Waa maxay ifafaalaha El Niño maxaase ka kooban?
2 Taariikhda El Niño
3 Nidaamyada ogaanshaha El Niño
4 Sidee bay saameyn ugu leedahay cimilada?
4.3 Koonfur Bari Aasiya
5 Ilmaha »Godzilla»
Waa maxay ifafaalaha El Niño maxaase ka kooban?
Dhacdadan waxay la xiriirtaa kululaynta biyaha badda Baasifigga, Kuwaas oo kululeeya inta udhaxeysa 1 ilaa 3ºC marka la barbardhigo caadiga, 3 ama 7dii sanaba mar. Qaabkan kuleylka iyo qaboojinta oscillating waxaa loo yaqaan wareegga ENSO (ama ENSO). Waxay si toos ah u saameysaa qaabka roobka ee meelaha kuleylaha, laakiin waxay saameyn weyn ku yeelan kartaa cimilada qeybaha kale ee adduunka. Labada El Niño (oo la xidhiidha kululaynta) iyo La Niña (oo la xidhiidha qaboojinta biyaha) ayaa ah wejiyada xad-dhaafka ah ee wareegga 'ENSO', oo leh weji saddexaad oo loo yaqaan Dhex-dhexaad ah, inta lagu guda jiro heerkulka caadiga ah la duubo.
Taariikhda El Niño
Magaca ifafaalaha El Niño (oo loola jeedo ilmaha Ciise), waxaa siiyay kalluumeysatada reer Peru durdur diirran oo sanad walba soo baxa illaa xilliga Kirismaska, taas oo doorbideysa imaanshaha kalluun fara badan. Waxay u arkeen inay tahay hadiyad rabbaani ah, sidaa darteed waxay durba bilaabeen inay aqoonsadaan isbeddelkan ku yimid heerkulka badda oo leh magaca El Niño.
Si kastaba ha noqotee, 60s waxay bilaabeen inay ogaadaan inaysan ahayn dhacdo maxalli ah oo ka jirta Peru, laakiin ay saameyn ku yeelatay dhammaan badweynta Baasifigga, xitaa wixii ka baxsan. Waqtigaan la ogyahay inay saameyn ku yeelan karto cimilada adduunka oo dhan inta lagu jiro wejigeeda oo dhan. Wareegga oo dhan 'ENSO' wuxuu socdaa inta u dhexeysa 3 iyo 7 sano, sidaan nidhi. Sanadahan, waxaa jira wajiyo diiran oo soconaya inta udhaxeysa 8 iyo 10 bilood midkiiba (El Niño), wejiyada dhexdhexaadka ah sidoo kale waxaa jiri kara waji qabow (La Niña). ENSO waa wareeg aad u isbedbeddela, xoog iyo muddaba. Xaqiiqdii, weli lama oga hubaal waxa sababa isbeddeladan inay yihiin.
Nidaamyada ogaanshaha El Niño
El Niño waxaa lagu ogaadaa habab kala duwan, oo muujinaya dayax gacmeedyada, doonyaha sabeeya iyo falanqaynta badda. Cilmi baarayaashu waxay si isdaba joog ah u helayaan xogta ku saabsan xaaladaha dusha sare ee badaha, iyo sidoo kale dabaysha ka jirta aagga bartamaha.
Sidee bay saameyn ugu leedahay cimilada?
Markii la horumariyo, isbeddelada muhiimka ah ee heerkulka iyo qaababka roobka ayaa ka dhaca meelo badan oo adduunka ah. Isbeddeladani waxay dhacaan sababtoo ah saameyn ku yeesho qaababka dabaysha ee jawiga. Marka laga hadlayo kuleylaha, hawada u kacda si ay u samayso daruuro roob ah hal meel waa inay u dhaqaaqdaa meel kale oo ay ugu wacan tahay culeyska culeyska. Dunida inteeda kale, isbeddelka dabaysha waxay kaloo sababi kartaa abaaro geesaha qaarkood, ama roobab culus kuwa kale.
Si loo ogaado loona fahmo inta ay saameyn ku yeelan karto cimilada adduunka, aan aragno waa maxay cawaaqibyadeeda:
Diiwaanada Ee heerkulka
Muuqaal cudurada ay adagtahay in la dabar jaro
Guuldarro noocyada xoolaha iyo dhirta
Isbedelada wareegga hawada
Muddooyinka aad u qoyan, xilligaas oo roobabku aad u daran yihiin.
Kuleyl ee Humboldt Current.
Hoos u dhac cadaadiska Hawada.
Koonfur Bari Aasiya
Heerkulka badda Baja.
Xaddidan samaynta daruur.
Sikastaba, maskaxda ku hay taas ma jiraan laba El Nino isku mid ah, iyo isbeddelada xilliyeed iyo sidoo kale qaababka cimilada ee kala duwani way ku kala duwanaan karaan kiis ilaa kiis. Marka, markay horumarto, lama damaanad qaadi karo in aagagga ay dhibaatadu saameysey ay la mid noqon doonaan sidii markii ugu dambaysay, laakiin in si fudud ay jiri doonto ixtimaal sare, laakiin lama hubo inay mar kale isku mid noqon doonaan.
Sida meeraha u kululaado, wuxuu door bidaa muuqaalka duufaanno aad u xoog badans. Heerkulka diirran wuxuu saameyn toos ah ku leeyahay El Niño, sidaa darteed shaki la'aan qaar baa aad u daran fidgety. Waqooyiga Hemisphere 2016 heerkulka wuu ka sarreeyay sidii caadiga ahayd: cirifka woqooyi waxay lahaayeen 2ºC marka caadigu yahay -26ºC. Dhinaca kale, Koonfurta Hemisphere iyo gaar ahaan Sonora (Mexico) baraf ayaa ka da’ay markii ugu horreysay muddo 33 sano ah. Laatiin Ameerika, roobabkii badnaa ee ka da'aya rubuca koowaad ee sanadka waxay ahaayeen halyeeyada qaybtaas adduunka.
Marka lagu daro heerkulbeegyada, khubarada sidoo kale waxay eegeen dhererka Badweynta Baasifigga. Sida aad sawirka ku aragtaan, xaalada 97 waxay kudhowdahay mid lamid ah tii aan haysanay dhamaadka sanadka 2015.
Sida laga soo xigtay NASA, El Niño 2016 ma muujineyso calaamado muujinaya inuu doonayo inuu fidiyo. Caadi ahaan, saameynteeda waxaa laga dareemayaa Waqooyiga Hemisphere guga oo dhan, laakiin way yaraanayaan markay bilaha sii socdaan. Laakiin markan waxay u egtahay inay ka duwanaan doonto.
Cawaaqibta waxaa laga dareemi doonaa gaar ahaan Koonfurta Ameerika, laakiin "meel kasta oo aad ku nooshahay, waxaad dareemi doontaa saameynta ay leedahay ifafaalaha," ayay tiri NASA.
Marka la eego ifafaalahaan, wax yar baa la qaban karaa. Waxa ugu fiican ayaa ah inaad isku daydo inaad la qabsato sida ugu fiican ee aad kari karto, oo aad u feejignaato digniinta cimilada si looga fogaado dhibaatooyinka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Awooda cajiibka ah ee El Niño »Godzilla»